Horay U Qorsheynta | LawHelp Minnesota
Planning Ahead (PDF)372.18 KB
Horay u qorsheynta marka da’daadu sii weynaato waa muhim waana wax wanaagsan. Waxa ay kaa caawineysaa in aad hubiso in sida aad dooneyso ay yeelaan dhakhtarkaaga iyo xubnaha qoyska. In aad horay u sii qorsheyso waxa ay u fududeysaa qoyskaaga in ay si wanaagsan u maareeyaan dhaxalkaaga geerida ka dib.
Halkan waxa aan kuugu soo gudbineynaa qaar ka mid ah su’aalaha aad ka fikireyso:
Yaa kuu gaaraya go’aanada caafimaadka iyo maaliyadda haddii aadan adigu gaari karin go’aankaas?
Maxaa dhacaya haddii lagu geeyo guryaha dadka lagu hayo?
Sidee ayaad ku xaqiijineysaa in hantidaadu gaarto dadka leh dhaxalkaaga?
Waxaa jira dhawr talaabo oo aad sharci ahaan qaadi karto xilligan oo kale ee qorsheynta dhamaadka nolosha. Ugu yaraan, waa in aad qortaa Dardaaranka Caafimaadka oo aad qof aad aaminsan tahay aad ugu magacaabeyso inuu kuu gaaro go’aanada haddii aadan go’aan isu gaari karin.
Iyada oo ku xiran xaaladaada, waxaa kale oo laga yaabaa in aad u baahato Wakiilasho sharci ah, Dardaaran ama Wareejinta Hantida Dhimashada Ka Dib.
Dardaaranka Caafimaadka waa qoraal kaa caawinaya dadka aad u dooratay in ay kuu gaaraan go’aanada la xiriira caafimaadka marka ay dhakhtarkaaga u cadaato in aadan go’aan isu gaari karin.
Dardaaranka Caafimaadka waxa aad dooraneysaa:
Yaa noqon kara Wakiilkaaga Caafimaadka. Wakiilkaaga caafimaadka waa qofka aad ku aamintay inuu kuuu gaaro go'aanada.
Kala dardaaranto sida aad dooneyso inuu yeelo Wakiilkaaga Caafimaadka.
Wakilkaaga Caafimaadka ayaa awood buuxda u leh inuu la hadlo dhakhtarkaaga, eego diiwaankaaga caafimaadka, oo go’aan ka gaaro nooca daryeelka laguu fidinayo.
Waxaa ka mid noqon kara meesha aad jeclaan laheyd in lagugu daaweeyo iyo goorta aad dooneyso in daawada la joojiyo. Doorashada adiga ayaa iska leh.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan foomka Dardaaranka Caafimaadka ee aad isticmaali karto, ka akhriso xogta urursan ee Health Care Directives (Dardaaranka Caafimaadka).
Wakiilashada waa qoraal aad ugu ogolaaneyso qof kale inuu mas’uul ka noqdo hantidaada/arrimaha la xiriira maaliyadda.
Qofka aad magacowdo ayaa mas’uul ka ah inuu maareeyo arrimahaaga waxaana loogu yeeraa Qof Qareen Kuu Ah. Talaabooyinka uu qado qofka aad wakiilato waxa ay la mid tahay talaabooyin aad adigu qaaday. Waxyaabaha qofka aad wakiilatay qaban karo waa inuu kaa caawiyo in aad jeeg qorto ama hanti iibiso haddii aad u guurto guri ama hoyga dadka lagu hayo. Waxaa sidoo kale muhim ah in aad wakiilkaaga u sheegto xogta ku saabsan ganacsigaaga iyo waxyaabaha kale oo aadan cid kale la wadeegteen isaga ma ogiye.
Muhim: Xitaa haddii aad heysato foomka Wakiilashada, weli waad gaari kartaa go’aano aad u madax banaan tahay ee hantidaada iyo arrimaha maaliyadda.
Foomka wakiilashada, waxa qofka aad wakiilatay aad awood u siin kartaa inuu go’aan kuu gaaro haddii aadan go’aan isu gaari karin. Qofka aad wakiilaneyso waajib ma aha inuu yahay qareen, laakiin waa inuu noqdaa qof aad aamisan tahay.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan foomka Dardaaranka Caafimaadka ee aad isticmaali karto, ka akhriso xogta urursan ee Wakiilashada Dardaaranka Caafimaadka (Power of Attorney).
Dardaaranku waa qoraal sharci ah oo aad ku qeybineyso lacagtaada, hantidaada iyo alaabaaada shaqsiga ah geerida ka hor. Waajib kuguma aha in aad qorto dardaaran.
Haddii aad geeriyooto adiga oo aan dardaaran ka tagin, sharciyada dhaxalka ayaa lagu maamulayaa qeybinta hantidaada. Hantidaada waxaa la siinayaa qofka ehel ahaan kuugu dhow. Haddii aad leedahay xaas/say iyo caruur,, hantidaada iyaga ayaa loogu qeybinayaa nidaam horay loo dajiyey. Haddii aadan laheyn, hantidaada waxaa loo qeybinayaa sidan.
caruurta awoowaha aad u tahay
Gabdhaha iyo wiilasha
Qaraabada fog haddii aysan jirin qaraabo dhow.
Waxa aad u baahan tahay dardaaran haddii aad dooneyso in aad wax uga tagto saaxiib ama sadaqo, haddii aad dooneyso in aad wax gaar ah uga tagto qof kale, ama aad dooneyso qof kale hanti uga tagto oo laga yaabo inuu ku dhaxli karo. Waxa kale oo aad macagaabi kartaa Wakiil Shaqsi Ah si uu ula socdo sida loo qybiyo hantidaada in ay waafaqsan tahay sidii aad ka dardaarantay.
Waa wax wanagsan in aad dardaaran qorto. Xitaa haddii aadan laheyn dardaaran, waxa aad qoyskaaga u fududeyn kartaa adiga oo xaqiijiya in xisaabahaaga bangiga, ceymiska nolosha iyo xisaabta hawlgalka ay iyagu yihiin kuwa leh dhaxalka. Haddii xisaabahaaga bangiga ama maalgelinta kale ay ku qoran yihiin dadka leh dhaxalkaaga, qoyskaaga uma baahanayaan in ay tagaan maxkamadda dhaxalka si ay lacagtaada u helaan.
Akhri xogta urursan Common Questions About Wills (Su’aalaha inta badan la iska weydiiyo dardaaranka).
Wareejinta Hantida Geerida Ka Dib (TODD)
TODD waxaa loo adeegsan karaa dardaaranka dhaxalka oo lagu wareejiyo hantida marka qofku geeriyoodo. Waxa aad kaga maarmi kartaa maxkamadda dhaxalka.
Waxa kale oo aad TODD u adeegsan kartaa in aad hantidaada ku wareejiso qofka aad nolol wadaagga tihiin ama cidii kale ee aad dooneyso.. Qofka heysta TODD wax xuquuq ama maamul ah kuma laha hantida ilaa aad ka geeriyooto. Marka laga hadlo qorsheynta dhaxalka, kala tasho qareen fursadaha aad heysato. Waxaa lagaa yaabaa in TODD uusan aheyn xalka ugu wanaagsan ee qof kasta.
Waxaa jira dhibaatooyin badan oo ka dhalan kara haddii aadan aheyn mulkiilaha kaliya ee hantida. TODD kama hor istaageyso xaaska/sayga ama qof kula qoran guriga inuu sheegto hantida. TODD ma hor istaagi karto rahmadda MA ama qaansheegasho liddi ku ah dhaxalka.
Akhri xogta urursan ee ku saabsan Transfer on Death Deeds (Wareejinta Hantida Geerida Ka Dib).
Dadka Lagu Hayo Guryaha Kalkaaliyaasha Caafimaadka iyo Ceymiska Caafimaadka Gobolka
Ka fikir sida ay suurogal u tahay in lagu geeyo guryaha dadka lagu hayo waa talaabo kale oo muhim ah in aad sii qorsheyso. Guryaha kalkaaliyaasha caafimaadka ee dadka lagu hayo waa kuwo aad qaali u ah. Waxa aad ku bixineysaa hantidaada si aad halkaas u joogto.
Ceymiska Caafimaadka Gobolka (MA) waxa uu bixiyaa marka aanay dadku laheyn hanti la tirin karo ama ay hantida ay heystaan yar tahay oo ay ka soo baxaan shuruudaha. Ceymiska caafimaadka gobolka waxa kale oo uu bixiyaa qaar ka mid ah kharashyada dadka guryaha lagu hayo iyo qaar ka mid ah Adeegga Loogu Qabto Guryaha Lagu Hayo.
Sharcriyada u degsan MA waa kuwo aad u cakiran. Mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan waa in aadan hantida ku gadi karin wax ka yar qiimaha ay suuqa ka joogaan. Degmada aad ka codsato waxa ay dib u eegaan sida aad ku bixisay dhamaan hantida aad iibisay ama wareejisay 5tii sano ee la soo dhaafay. Waxa aad ku mudaneysaa ganaax haddii aad ilmahaaga siisay guriga adiga oo uga tanaasulay ama aad hantidaada ku gaday wax ka yar qiimaha ay suuqa ka joogto handtidu kuna qorto codsigaaga MA.
Haddii aad si khalad ah ku bixisay lacag ama hanti, waa laguu diidi karaa Ceymiska Gobolka muddo bilo ah ama sanado ah. Taasi waxa ay dhibaato culus ku keeni kartaa qoyskaaga. Waxaa jira qareeno ku takhasusay Sharciyada Dadka Waaweyn. Waxa ay kaa caawin karaan in aad qorsheyso si aad u reebato lacagta ugu badan ee suurogalka ah iyo hantidaada welina aad xaq u yeelato Ceymiska Caafimaadka ee Gobolka. La tasho qareen qaabilsan Sharciyada dadka Waaweyn hadii aad leedahay dakhli fara badan iyo hanti.
Akhri xogta urursan ee Assisted Living and Nursing Home Laws in Minnesota (sharciyada Goobaha Dadka Da'da Ah lagu Hayo ee Minnesota.
Qodobada La Xiriira
Su’aalaha Ku Saabsan Dhaxalka
Guardianship and Conservatorship (Su’aalaha La Xiriira Maxkamadaha Dhaxalka, Mas’uul Ka Noqoshada Iyo U Maamulidda Dhaqaalaha)
Mareegta aad ka heli karto xog dheeraad ah:
Xisaabiyaha Lacagta Hawlgabka ee Ceymiska Bulshada: www.ssa.gov/retire/estimator.html
Minnesota Department of Human Services (Waaxda Adeegga Dadweynaha ee Minnesota): Health Care Coverage for People Who Need Nursing Home Care (Ceymiska Caafimaadka ee Dadka Lagu Hayo Guryaha Kalkaaliyaasha Caafimaadka) ama soo booqo: www.mn.gov/dhs and type health care coverage for people who need nursing home care into the search bar.
Senior Linkage Line (Kahdka lagu caawiyo dadka da’da ah): 1-800-333-2433